स्वरुप बदल्दै सल्यान अस्पताल ! « Salyan Today
स्वरुप बदल्दै सल्यान अस्पताल !
'स्तरीय सेवा प्रवाहको लागि कुनै कसुर बाँकी रहदैँन्'
सल्यानको सदरमुकाम खलंगामा रहेको सल्यान जिल्ला अस्पतालको स्वरुप परिवर्तन हुन थालेको छ । ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्वीकृति पाउने आसमा रहेको सल्यान अस्पतालले भौतिक संरचना सँगै थप सेवा बिस्तार गरेर स्तरीय बनाउदैँ लगेको छ । अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुको सरुवा लगाएतका बिबिध कारणले समस्या झेल्दै आएको अस्पतालले अहिले स्वरुप बदल्न थालेको हो ।
डाक्टरको अभावमा जिल्ला अस्पतालमा झण्डै दुई सातादेखि बन्द रहेको शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएको छ । अस्पतालमा नयाँ विशेषज्ञ चिकित्सक आएपछि शल्यक्रिया र जटिल प्रसूति सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएपछि सल्यान सहित रुकुम र रोल्पाका बिरामीलाई उपचारका लागि सजिलो भएको छ ।
विशेषज्ञ उपचार सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी महँगो रकम खर्च गरी दाङ र नेपालगन्ज जान बाध्य थिए । करिब दुई साताअघि सरुवा भएर गएका एमडीजीपी डाक्टरको ठाउँमा उनी सरहकै चिकित्सक आएपछि शल्यक्रिया सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालमा अहिले एक विशेषज्ञ चिकित्सक र चार जना मेडिकल अधिकृत गरेर पाँच जना डाक्टरहरु कार्यरत रहेका छन् । यसले गर्दा बिरामीहरुको उपचारमा सहजता थपेको उहाँको भनाइ छ । अब अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी भेन्टिलेटर र आईसीयू सेवा सञ्चालनको तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालमा अहिले २ सय बढी बिरामीले दैनिक उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
३३ करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिदैँ
सल्यान जिल्ला अस्पतालको सेवालाई थप व्यवस्थित र स्तरीय बनाउन ३३ करोडको लागतमा भवन निर्माण गर्न थालिएको छ । अस्पताल परिसरमा नै कर्णाली प्रदेश सरकारको वजेटबाट ५ तले भवन निर्माण गर्न थालिएको हो । यसले अस्पताललाई थप व्यवस्थित गर्दै सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्धत गर्ने जनाइएको छ ।
निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक श्रेष्ठले अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सबै सेवालाई स्तरीय बनाउदैँ लगेको बताउनुभएको छ । उहाँले पुरानो भवनमा रहेको ओपिडी सेवालाई शारदा नगरपालिकाले निर्माण गरिदिएको नयाँ भवनमा सारिएको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेश सरकारसँग एम्बुलेन्स र शवबाहन खरिदको लागि माग गरिएको छ, एम्बुलेन्स र शवबाहन प्राप्त भएमा सेवा प्रवाहमा झन् सहजता हुने छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्तरीय सेवा प्रवाहको लागि कुनै कसुर बाँकी रहदैँन्
अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश ओलीले जिल्ला अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सेवालाई स्तरीय बनाउनको लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । ‘१५ शैयाको अस्पतालबाट झण्डै ४० शैयाको हाराहारीमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, १५ शैयाको दरबन्दीको जनशक्तिले ४० शैया सम्मलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा पनि दरबन्दी अनुसार जनशक्तिको पदपूर्ती नहुदाँ केही समस्या भएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘छिटो, छरितो र स्तरीय सेवा प्रवाहको लागि अस्पताल प्रयत्नशिल छ ।’
उहाँले अस्पतालको संरचना निर्माणमा असर गर्ने र अव्यवस्थित तथा पात झरेर फोहोर हुने अस्पताल वरपरका रुखहरु हटाउन थालिएको बताउनुभएको छ । यस्तै अस्पतालमा १८ वटा शौचालय चालु अवस्थामा रहेको, २४ सैँ घण्टा धारामा पानी आउने व्यवस्था गरिएको, फोहोर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरिएको, अस्पतालका कपडा एवम् भाँडाहरु सफा गर्नको लागि साविङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै अस्पतालको क्यान्टिनलाई व्यवस्थित गरिने, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीकाहरुको लागि व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गरिने, अस्पतालमा अगाडी पार्किङको व्यवस्था गरिने, श्रीनगर–खलंगा सडकखण्ड अन्र्तगत आमा चौतारी नजिकैबाट सिधैँ आकस्मिक कक्षमा एम्बुलेन्स जाने गरी सडक व्यवस्थापनको काम भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैविच निक साइमन्स ईन्स्टिच्युट र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका बिच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पाँच बर्षे सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको छ । निक साइमन्सले अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति, आवश्यक औजार उपकरण, तालिम लगाएतको व्यवस्था गर्दै आएको छ । निक साइमन्सकै सहयोगमा यसअघि जिल्ला अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।